ချဲလ်ဆီးတို့ ဝမ်းနည်းရပြီး လက်စတာနဲ့ လီဗာပူးတို့အောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့ . . . EPL Final Week အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ – Sport Gaber
ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် ပွဲစဉ်ကို ရောက်လာခဲ့ ပါပြီ ။ ချန်ပီယံနဲ့ တန်းဆင်းအသင်းတွေ အဖြေထွက် သွားကြပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ၂ နေရာ ၊ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ကွန်းဖရန့် လိဂ် ဝင်ခွင့်တွေ အတွက် ကတော့ နောက်ဆုံး မိနစ် အထိ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှား ကြရဦးမှာပါ ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာ ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် Sky Sports ရဲ့ တင်ဆက်သူ လူးဝစ် ဂျုံးစ် ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါတယ် ။
၁ ။ အက်စတွန်ဗီလာ – ချဲလ်ဆီး
အဆင့် ၄ နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်ကို ယူမလား ၊ နောက် ၆ ရက် အကြာမှာ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် အတွက် စွန့်စားမလား . . . သောမတ်စ် တူချယ် ဆုံးဖြတ် ရတော့မှာပါ ။ ချဲလ်ဆီး လူကုန်ထုတ်ရင် ဗီလာ ကို နိုင်ဖို့ မခက်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လူစုံ ထုတ်တာက အန္တရာယ်များပါတယ် ။
ဗီလာ က ဘာမှ မျှော်လင့်စရာ မရှိတော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေ ပြန်ဝင်လာတဲ့ ပွဲမှာ မျက်နှာ အပျက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့ဟာ ဒီရာသီ မှာ လီဗာပူးကို အိမ်ကွင်းမှာ7ဂိုး သွင်းထားတဲ့ အသင်းဆိုတာ ချဲလ်ဆီးတို့ မေ့ထားလို့ မရပါဘူး ။ ဗီလာ က လူစုံထုတ် လာပြီး ချဲလ်ဆီးက Line-up မပြည့်ခဲ့ရင် ဧည့်သည်တို့ အနိုင်ရဖို့ ခက်မှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – ဗီလာ ၁ – ၁ ချဲလ်ဆီး
၂ ။ လက်စတာ – တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး
စပါးက ရာသီမကုန်ခင်မှာပဲ ပြိုဆင်း နေပါပြီ ။ ဟယ်ရီကိန်း ၊ ဆွန်ဟောင်မင် တို့လို စတားတွေလည်း နွေရာသီ မှာ အသင်းသစ် ရှာဖွေဖို့ စိတ်ကူး နေကြပါပြီ ။ မော်ရင်ဟိုကိုထုတ် ၊ လိဂ်ဖလားမှာ အရေးနိမ့်ပြီး ကတည်းက စပါးတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ် ကျသွားခဲ့တာ အသိသာကြီးပါ ။ အဲ့ဒါရဲ့ အကျိုးဆက် က ရလဒ်တွေ ဆိုးလာတာပါပဲ ။ အခုလည်း ပုံစံကောင်း ရနေတဲ့ လက်စတာကို နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဥရောပ ဝင်ခွင့်ဟာ ရော်ဂျာ အတွက်ပဲ ဖြစ်လာမှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – လက်စတာ ၂ – ၁ စပါး
၃ ။ လီဗာပူး – ပဲလေ့စ်
လီဗာပူးတို့ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက် ပြန်မှန် လာပါပြီ ။ ဒီပွဲကို နိုင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြည့်နေစရာ မလိုတော့တာ ကြောင့်လည်း အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင် ကစားမှာပါ ။ အန်ဖီးလ် ဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ နဲ့ ပြန်လည် ရှင်သန်လာတော့မှာပါ ။ ဒါတွေကို ပဲလေ့စ် တွန်းလှန် နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး ။
ခန့်မှန်းချက် – လီဗာပူး ၃ – ၁ ပဲလေ့စ်
၄ ။ အာဆင်နယ် – ဘရိုက်တန်
မဖြစ်မနေ အနိုင်ရဖို့ လိုတဲ့ ပွဲမှာ ဘရိုက်တန်လို ခြေရူးအသင်းနဲ့ ဆုံရတာ အာဆင်နယ်အတွက် ကံသိပ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောရမှာပါပဲ ။ အထက်က စပါး နဲ့ အဲဗာတန် တို့ ရှုံးနိုင်ချေ ရှိပေမယ့် အာဆင်နယ် ကလည်း ဘရိုက်တန် ကို အနိုင်ရဖို့ ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ်ကူ ပါဘူး ။ ဒန်နီ ဝဲဘတ် နဲ့ မူပေး တို့ ပါနိုင်ပေမယ့်လည်း ဂရေဟမ် ပေါ်တာက သူ့အသင်းကို ကောင်းကောင်း တည်ဆောက်ပြီး အီးမရိတ်ကို ရောက်လာမှာပါ ။ သရေကျသွားဖို့ များနေပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် ၂ – ၂ ဘရိုက်တန်
၅ ။ မန်စီးတီး – အဲဗာတန်
ပရိသတ် ၁ သောင်း နဲ့ အစ်တီဟတ် ကွင်းထဲက မန်စီးတိးရဲ့ ဖလား အောင်ပွဲကို အဲဗာတန် တို့ ဖျက်ဆီးနိုင်မလား ၊ ဖြစ်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း အလွန်နည်းပါတယ် ။ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် အတွက် လူချန်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အရန် အင်အား တောင့်တင်းမှုက မန်စီးတီး ရဲ့ အားသာချက် ပါပဲ ။ အခုလည်း အရန်လူတွေရဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ပဲ အဲဗာတန် ကို အနိုင် ကစားသွားမှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး ၂ – ၁ အဲဗာတန်
၆ ။ ဝုဗ် – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ နဲ့ လက်တစ်ကမ်း အနေအထားမှာ ရှိနေတာကြောင့် ဒီပွဲကို ယူနိုက်တက်တို့ စွန့်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဝုဗ် ဘက်ကလည်း နည်းပြကြီး နူနို ရဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် အနိုင်ရအောင် ကစား သွားမှာပါ ။ ယူနိုက်တက် ဘက်က အရန်လူတွေ နဲ့ ပွဲထုတ်လာမယ်ဆိုရင် ဝုဗ် နဲ့ ခြေညီနိုင်ပါတယ် ။ ဝုဗ်ဘက် မှာလည်း အရင်လောက် တိုက်စစ်မထက်မြက်တော့တာကြောင့် ဂိုးရဖို့ ရုန်းကန် နေရတာပါ ။ သရေနဲ့ပဲ ပြီးသွားဖို့ ရှိပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – ဝုဗ် ၁ – ၁ မန်ယူနိုက်တက်
၇ ။ ဝက်စ်ဟမ်း ၁ – ၁ ဆောက်သမ်တန်
၈ ။ ဖူလ်ဟမ် ၂ – ၃ နယူးကာဆယ်
၉ ။ လိဒ် ယူနိုက်တက် ၄ – ၂ ဝက်စ်ဘရွန်း
၁၀ ။ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ၀ – ၂ ဘန်လေ